शास्त्रका अनुसार लाफिङ बुद्धलाई घरको यस स्थानमा राख्नुभयो भने हुनेछ सुख र धन वृद्धि ! – Medianp
शास्त्रका अनुसार लाफिङ बुद्धलाई घरको यस स्थानमा राख्नुभयो भने हुनेछ सुख र धन वृद्धि !
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, पुष २७, २०७५१४:५३0
काठमाडौ । वास्तुशास्त्रका अनुसार विभिन्न मान्यताहरु रहेको छ । किनभने हाम्रो दैनिकी नै देवताको आश र आफ्नो एक मुठी सासमा बाचेको छ । त्यसैले हिन्दू धर्ममा कुबेरलाई धन वृद्धि गर्ने भगवान मानिएको छ भने चीनमा लाफिङ बुद्धलाई शुभ र धन वृद्धि गर्ने देवता मानिएको छ । यस्ता चीजहरु तपाई हामीले आफ्नो घरमा जथाभावी राख्ने गरेका छौ । भने आजै विचार गर्नुस । किनभने यसको राख्ने सही दिशा हुनुपर्छ । यदि अटेर गरेमा तपाईको घरमा अनिष्टि पनि हुन सक्छ । हेर्नुस्
-पहिलो वास्तुका अनुसार कुबेर वा लाफिङ बुद्धलाई घरमा ल्याएर पूर्व दिशा फर्काएर राख्नुपर्छ । किनभने यो दिशा भनेको परिवारको सुख , शान्ति , भाग्य , र आपसी प्रेम र तालमेलको ठाउँ हो । तर विचार गर्नुस आफ्नो आमुन्ने सामुन्ने हुने ठाँउमा राख्नुस् ।
-दोस्रोमा फेंगशुईको नियम अनुसार लाफिङ बुद्धलाई आफ्नो घरमा दक्षिण पूर्व दिशा राख्नुपर्दछ । किनभने यो दिशामा राख्यो भने सकारात्मक उर्जा बढ्ने ,धन, सुखलाई बढ्ने हुन्छ । यसमा पनि त्यसको मुख मुलढोका तिर पर्ने गरी राख्नुपर्दछ ।
ट्रम्पलाई अर्को झट्का : अमेरिकी उपमहान्यायाधिवक्ताले पनि दिए राजिना